निजामती सेवामा अवकाशको उमेरहद बहस र औचित्यता - प्रशासन प्रशासन
प्रकाशित मिति : 27 December, 2019 7:28 am
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माण भईरहेको विषय अहिले ज्यादै चर्चामा छ । कर्मचारीको बढ्दो औषत आयू (Rising life expectancy) र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश (Age of retirement) मा तालमेल स्थापना गर्नुपर्ने मान्यतामा रहि आएको छ । यसको विपक्षमा पनि विभिन्न मतहरु सुनिने गर्दछन् । अवकाशको बिश्वव्यापी मान्यताको चर्चा गर्दै र नेपालको निजामती प्रशासनमा यसको प्रभाव विश्लेषण गर्दै अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउनुको औचित्यता पुष्टि गर्नुहोस ।
सेवारत कर्मचारीलाई संगठनको विधमान कानून बमोजिम सेवावाट ‍औपचारिक रुपमा अलग राख्ने प्रकृया नै अवकाश हो ।अवकाश सम्वन्धी विभिन्न विश्वव्यापी मान्यताहरु हुन्छन्, त्यसैको आधारमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश व्यवस्था कानूनमै गरिएको हुन्छ । नेपालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावलीमा अवकाश सम्वन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । यद्वपि पछिल्लो समयमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने बिषयमा पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क र छलफल चल्ने गरेका छन् ।
२. कर्मचारीको औषत आयू (Rising life expectancy) र कर्मचारीको अवकाश मान्यता (Age of retirement):
सेवा निवृत्त हुने स्पष्ट किटान सहित कानूनी व्यवस्था सर्वप्रथम जर्मनीमा १८८० मा जर्मनीबाट शुरु भएको पाइन्छ । सेवावधि यहि नै हो भन्ने विश्वभरी एउटै मान्यता रहि आएको पाइदैन् । विभिन्न देशको अवकाश उमेरहदलाई आधार मानि विश्लेषण गर्ने हो भने कर्मचारीको अवकाश आधार/मान्यताहरु निम्न पाइन्छ ।
राज्यका नागरिकको औषत आयू
राज्यको Demographic Structure (बालवालिका, बृद्वबृद्वा कति छन् )
राज्यको वेरोजगार दरको अवस्था
Youth Brain Drain अवस्था (Push and Pull Factor)
अवकाश पछि कर्मचारीको Span of Life मा परेको प्रभाव
जनशक्ति, श्रमिक वा कर्मचारीको मानसिक र शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त अवस्था
३. कर्मचारीको औषत आयू र अवकाश उमेरमा किन तालमेल मिलाउने त ?
राज्यको जनसंख्या, कर्मचारी संख्या, कर्मचारीको अवकाश पछिको Span of Life, अन्य देशको अभ्यास, देशको आर्थिक अवस्था, श्रम शक्तिको मानसिक र शारिरीक अवस्था आदीलाई आधार मान्दा निम्न कारणले गर्दा कर्मचारीको औषत आयू र अवकाश उमेरमा तालमेल मिलाउनु जरुरी छ ।
Early retirement ले कर्मचारीको Span of Life कमजोर बनाउछ । एक अध्ययनका अनुसार चाडै उमेरमा अवकाश भएका कर्मचारीहरु मध्ये ६०% भन्दा बढी कर्मचारीको थप आयू ७-१० बर्ष मात्र देखाइएको छ ।
चाडै अवकाश पाउने कर्मचारी अवकाश जीवनमा सोचेजस्तो काम,सम्मान नपाउदा मानसिक डर, कमजोर, चिन्ता नैराश्यता उत्पन्न हुने गर्दछ । कतिपयले आत्महत्या गर्ने, रोगको शिकार बन्ने जस्ता Negative Impact देखा परेका छन् ।
सक्षम कर्मचारीलाई संगठनमै राख्दा संगठनको उत्पादकत्व (Productivity) बढ्छ । उनीहरुका ज्ञान, सीप, क्षमतालार्इ उपयोग गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारीलाई मानव पुँजी (Human Capital) को रुपमा हेर्नुपर्छ । उनीहरुलाई संगठनको बोझको रुपमा हेर्नुहुन्न । बिश्वव्यापी अवकाशको आधार हेर्दा कुनै न कुनै देशले कर्मचारी अवकाश लिन इच्छा नगरुन्जेलसम्म सेवा गर्न सक्ने Scheme ल्याउने गरेका छन् ।
यसर्थ बिश्वव्यापी मान्यता अनुसार कर्मचारीको बिज्ञता र दक्षताको उपयोग गर्न पनि Expectancy Life Limit र Retirement Age Limit बीच तालमेल मिलाउन जरुरी छ ।
४. नेपालको निजामती सेवामा अवकाश उमेर बहस :
निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावी २०५० मा ब्यवस्था भए अनुसार कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ५८ बर्ष तोकिएको छ । यस बाहेक अन्य सरकारी सेवामा रहेको सेवा अवकाश उमेर निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
निजामती सेवा -५८ बर्ष
संसद र स्वास्थ्य सेवामा -६० बर्ष
अदालत न्यायधिस -६३ बर्ष
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस -६५ बर्ष
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी -६५ बर्ष
विश्वविधालय प्राध्यापक -६५ बर्ष
अवकाश उमेरहद कसरी निर्धारण गरिएको भन्ने बिषयमा, यी विविधतालाई पुष्ट्याइ गर्ने कुनै आधार भेटिदैन ।
अन्य देशको व्यवस्था
विश्वभरको अभ्यास हेर्दा अवकाश उमेर सीमा ( Retirement Age Limit) औषत ६० देखि ६५ बर्षको अन्तरमा प्रयोगमा ल्याइएका छन् । यी अभ्यासलाई निम्नानुसार अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
भारतमा ६० बर्ष,
अमेरिकामा (६५-७०) बर्ष,
बेलायतमा (६०-६५) बर्ष,
फ्रान्समा ६५ बर्ष,
मलेसियामा ६० बर्ष,
डेनमार्क ६५ बर्ष । सन् २०२२ मा ६७ बर्ष कायम गर्ने योजना
बेल्जियम (६०-६३) बर्ष । सन् २०३० मा ६५ बर्ष पुर्‍याउने योजना
अष्ट्रेलिया- ६५ बर्ष । सन् २०२३ मा ६७ बर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण
५. नेपालको निजामती सेवामा उमेरहद ६० बर्ष कायम गर्नुको औचित्यता :
नेपालमा पछिल्लो समयमा संघीय निजामती सेवा बिधेयक तर्जुमाको माध्ययबाट हालको अवकाश उमेरहद ५८ बाट २ वर्ष बढाएर ६० बर्ष पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा यसका पक्ष विपक्षमा मत जाहेर भइरहेका छन् । यद्यपी निजामति सेवामा अवकाश उमेरहद ६० बर्ष बनाउनु पछाडिको औचित्यता पुष्टि निम्नानुसार गर्न सकिन्छ ।
छिटो अवकाश (Early retirement) ले राज्यलाई पेन्सनभार पर्छ । यसलाई ब्यवस्थापनका लागि पनि सहयोगी हुन्छ ।
रोजगार रहनु भनेको उत्पादकत्व (Productivity) बढाउनु हो, जसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।
नेपालमा Early retirement पश्चात Social security का विषय, पक्षहरु ज्यादै न्यून छन् । कर्मचारी जीवन निर्वाहको लागि नै जागिरमा लागेको हुन्छ ।
बिकसित देश तुलनामा नेपालमा निजामती कर्मचारीको अवकाश पछिका सामाजिक सुरक्षाका पक्षहरु ज्यादै कमजोर रहेका छन् ।
सामान्यत: विश्व अभ्यास एवं मान्यता अनुसार कर्मचारीको Active Life Limit, Expectancy of Life, National Labour Market Intensity, Active Labour Force, Demographic Structure लाई आधार तुलना गरेर नै अवकाशको उमेरहद तोकिएको हुन्छ । यस अर्थमा पनि नेपालीको औषत आयू हाल ६९.७ बर्ष र श्रम वजारमा सकृय जनसंख्या धेरै नै रहेको छ ।- पन्ध्रौ योजना
चाडै अवकाश प्रणालीले कर्मचारीको Span of life कमजोर बनाउनुका साथै यसबाट कर्मचारीमा रोग, चिन्ता, नैराश्यता र मानसिक कमजोर हुदै आत्महत्याको अवस्था समेत आउन सक्छ ।
संघीयतामा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न सहयोग हुन्छ । पुराना कर्मचारीको ज्ञान, सीप क्षमतालाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।
पुरुषले ३५ बर्ष र महिलाले ४० बर्ष सेवा प्रवेश हद तोकिएको र ४० बर्षमा सेवा प्रवेश गर्ने महिलाहरु ५८ बर्षमै अवकाश हुँदा निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउन नसक्ने ब्यवस्था गरिएकोमा यसको समस्या हल हुन्छ ।
बिश्वका विकसित देश लगायत सार्क राष्ट्रको औषत अवकाश उमेरहद ६० बर्ष देखिन्छ । यसलाई समान बनाउन पनि ६० बर्ष कायम गर्न उपयुक्त छ ।
निजामती सेवा वाहेक अन्य सरकारी सेवामा अवकाशको उमेर हद ६०-६५ बर्ष देखिन्छ । सबै निकायसँग समन्यायिक बनाउन आवश्यक छ ।
६. कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० बर्ष ब्यवस्थाबाट पर्ने प्रभाव र समाधान :
कुनै पनि नीति तर्जुमा गर्दा यसले केहि पक्ष/बर्गलाई न्याय (फार्इदा) र अन्यलाई अन्याय (घाटा) त पक्कै गर्दछ नै। यसरी यसको ब्यवस्थाले पार्ने प्रभाव र ब्यवस्था गर्नका लागि गरिनुपर्ने यससँगै थप सुधार/समाधानलाई निम्न पक्षबाट केलाउन जरुरी छ ।
राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्ययभार कम हुन्छ ।
राष्ट्रिय पुँजी कोषको अवस्था कमजोर भएको कारण विकास बजेटलाई साधारण बजेटले धेरै पछाडि धकेलिदिएको छ । अवकाश हुने उमेर वृद्धि गर्दा यस अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।
कर्मचारीको अनुभव ज्ञान र सीपलाई संगठनले उपयोग गरी लाभ लिन सक्छ ।
संगठनमा उत्पादकत्व बृद्वि हुन्छ ।
Labor force participation rate बढ्छ ।
Old-age pension ratio बढ्दा अवकाश पछिको कर्मचारीको जीवन सहज हुन्छ ।
कर्मचारीको Life of Span बढाउन मद्वत गर्दछ ।
अनुभवी कर्मचारीमा काम गर्ने जाँगर उत्प्ररणा बृद्वि हुँदा संगठनको उत्पाकत्व वढ्छ ।
जनसंख्याको दुइतिहाइ बेरोजगार भएको जनसांख्यिक बनावटमा यसले रोजगारमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ ।
संगठनमा बढुवाको अन्तिम चरणका कर्मचारीलाई नकरात्मक असर गर्दछ । जस्तो; उमेर हदका कारण सेवा अवकाश हुने केहि बर्ष बाँकि भएका तर बढुवाका लागि योग्य भएका ।
संगठनमा युवा कर्मचारीको मनोवल र उत्प्रेरणा कमजोर हुन्छ ।
संगठनमा New Blood Inject गर्न आकर्षण हुदैन ।
Career shift effect बढ्छ ।
संगठनमा बढुवा प्रणालीलाई केहि समय अस्थिर बनाउनछ ।
श्रम बजारका युवाहरुको विदेश पलायन बढ्छ ।
अध्ययन विना हचुवाको भरमा २ वर्ष बढाइने ब्यवस्थाले अधिकाशं कर्मचारीको बृत्तिपथ (Carrier path) लाई असर गर्दछ ।
संगठनमा सबै उमेर समुहको सन्तुलन आवश्यक रहन्छ । उमेर अनुपात (Age Ratio) लाई विश्लेषण नगर्दा एकै उमेर समुहका अत्याधिक कर्मचारी भै नेतृत्व विकास, कार्य पद्वतिमा नै फरकपनता/द्वन्द्व बढ्ने खतरा हुन्छ ।
ब्यवस्थासंगै गर्नुपर्ने थप सुधार (समाधान)
कर्मचारीको मानव संशाधन नीति यथासिघ्र तर्जुमा गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
उच्च ब्यवस्थापन समुह कर्मचारीमा नेतृत्व विकासका लागि Succession Plan तयार गरिनुपर्छ ।
६० बर्षे अवकाश उमेरहद एकै पटक लागु नगरी ३ बर्षसम्म प्याकेज (Package) को रुपमा लागु गरिनु आवश्यक छ ।
कर्मचारीको अवकाश योजना तथा रणनीति तयार गर्नु आवश्यक छ ।
कर्मचारीलार्इ अवकाश अघि एक महिनाको Life Skill सम्वन्धि तालिम गराइनुपर्छ ।
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कर्मचारीमा Diversity management सम्वन्धी बिशेष योजना र रणनीति निर्माण गरिनुपर्छ ।
उमेर हद ६० बर्ष बनाउदा संगठन भित्र बढुवा प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले निजामती कर्मचारीको बढुवा सम्वन्धी नयाँ तवरबाट ब्यवस्थापन गरिनुपर्छ । जस्तो: Batch Promotion.
निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश उमेरहद शाखा अधिकृत (१८-२५ वर्ष) कायम गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई संगठन भित्रबाटै Grooming गरी बृत्तिपथ अनुमानयोग्य बनाउनुका साथै उपसचिव भन्दा माथीका पदहरुमा प्रतियोगितात्मक परिक्षा प्रणाली हटाइनुपर्छ ।
कर्मचारी अवकाश सम्वन्धी विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न आधार र मान्यताहरु रहेका हुन्छन् । कर्मचारीको अवकाश उमेर लहडमा लागेर वा विना अध्ययन बृद्वि गर्दा यसले राज्यको श्रम वजार, अर्थतन्त्र, सांगठनिक स्वरुप र जानसांख्यिक बनावटमा समेत प्रत्यक्ष असर गर्दछ । तसर्थ यसको समस्या हल गर्न बर्तमान अवस्था, मान्यता र आधारका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई केलाउदै Ageing Index, Labor force index, Active population Index लगायतको आधारमा विधमान सांगठनिक निजामती जनशक्तिको अवस्था र ब्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी कर्मचारीको सेवा अवकाश उमेरहद शर्त र परिधि भित्र रहि ६० वर्ष बनाउनु श्रेयष्कर हुन्छ ।